नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सफल ब्यबसायी, महाबाणिज्यदूत समेत रहेका ॠषि पुन्नाखर ढकाल यसो भन्नुहुन्छ !
सफल ब्यबसायी, महाबाणिज्यदूत समेत रहेका ॠषि पुन्नाखर ढकाल यसो भन्नुहुन्छ !
अमेरिकामा एउटा आशालाग्दो नेपाली, सफल ब्यबसायी, महाबाणिज्यदूत समेत रहेका ॠषि पुन्नाखर ढकालसंग नेपाल मदर डट कमका लागि प्रधान सम्पादक रामप्रसाद खनालले गर्नुभएको बिशेष कुराकानी ।
तपाईंको ब्य्बसायिक सफलतालाई नजिक बाट नियाल्न पाएँ । सुनेको मात्र थिएँ पहिले, आफ्नै आँखाले देखेर आएँ अहिले । तपाईं र तपाईंको सफलता प्रति मलाई गर्ब छ । सधै अगाडि बढीरहनुस, अझ धेरै सफलता हासिल गर्नुस हाम्रो हार्दिक शुभकामना पनि ।